कला / मनोरन्जन खबर Archives - Page4of 23 - www.kchhakhabar.com
मृत्युको मुखबाट उम्किएका गीतकार डा. बरालले तब लेखे ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन’
काठमाडौं/ मान्छे जिउन जन्मन्छ वा मर्न ? अपवाद बाहेक मान्छे अनुत्तरित बन्छ। उसो त मान्छेको जिन्दगी दुई प्रवृत्तिबाट गुज्रिएको हुन्छ- जीवनमुखी र मृत्युमुखी प्रवृत्ति। हामीलाई बाँच्ने प्रेरणा सानासाना खुसीले दिन्छ तर कहिलेकाहीँ अवसादबाट गुज्रिँदा मान्छेले मृत्युको बाटो रोज्छ। पूर्वीय सभ्यतामा मान्छे जन्मनु, विवाह हुनु, अनेक पारिवारिक कार्जे गर्नुलाई उत्सवको रूपमा लिइन्छ। जब मृत्यु भन्ने शब्द आउँछ तब ...
फेरि पनि कान्छा हिरोसँग ऐश्वर्या
पूर्वमिस वल्र्ड तथा अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको माग बलिउडमा अहिले पनि उस्तै छ । तर, पछिल्लो समय उनले फिल्ममा अभिनय गर्ने काम निकै कम गरेकी छिन् । ऐश्वर्यालाई अचेल आफूभन्दा कम उमेरका हिरोसँग अभिनय गरेको देखिन्छ । उनलाई अहिले पनि ग्ल्यामरस भूमिकाकै लागि निर्माता, निर्देशकले अफर गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष ऐश्वर्या आफूभन्दा कम उमरेका रणवीर सिंहका साथ ए दिल है मुस्किल फिल्ममा रोमान्टिक भूमिकामा देखिएकी थिइ...
आकाश श्रेष्ठका तीन हिरोइन, को बन्लान् ‘लक्की’ ?
कुनै पनि कलाकार स्टार वा हिट हुनका लागि उसँग काम गर्ने को-स्टारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कहिलेकाहीँ को-स्टारकै बलमा चलचित्र हिट भइदिन्छ । नायक पल शाह, प्रदिप खड्कादेखि सलिनमान बनियाँ यसैका उदाहरण हुन्, जसलाई हिट बनाउनमा उनीहरुको को-स्टारको स्टारडम महत्वपूर्ण थियो । पल र प्रदिपलाई पुजा शर्मा तथा सलिनमानलाई साम्राज्ञी फापेका थिए । चलचित्र ‘म त तिम्रै हुँ’ बाट नेपाली रजतपटमा भित्रिएका नायक...
हाँस्यकलाकार सुरज चपागाई ‘बान्द्रे’ लाई मंगलबार बिहान नौ बजे फोन गर्दा उनी ससुराली जाँदैथिए । न कुनै चाडपर्व, न त कुनै कार्यक्रम । किन ससुराली जान लाग्नु भएको ? बान्द्रेले हाँस्दै जवाफ दिए । ‘छोरीको न्यास्रोले ।’ हालै मात्र छोरी जन्मेपछि उनकी श्रीमती माइतीघर काभ्रेमै छिन् । त्यसकारण बान्द्रेको ससुराली आउजाउ पनि बाक्लिन थालेको छ । उनलाई लाग्छ, ‘म सबैभन्दा धेरै ससुराली धाउने ज्वाईको रुपमा पर्छु ह...
नायिका आशिष्माले गरिन् विहे
काठमाडौं/नायिका आशिष्मा नकर्मी आज विवाह बन्धनमा बाधिएकी छन् । आशिष्माले हाल अमेरिका बस्दै आएका काठमाडौं पुरानो बानेश्वरका नविन्द्रचन्द्र प्रधानसँग विहे गरेकी हुन् । नेवारी परम्परा अनुसार आशिष्माको विहेको लगन बिहान ११ बजेको साइतमा भएको छ । साथीभाइलाई भने ३ बजेपछिमात्रै विहे भोजमा बोलाएको र आजै राति आशिष्माको विदाई दिने पारिवारीक स्रोतले जनाएको छ । विहे, कालिमाटी व्यांक्वेटमा गरिएको छ । आशिष्माको...
रञ्जनको मुटुमा रक्षाको नाम लेखिएपछि…
म्यूजिक भिडियो अहिले कलाकारका लागि आम्दानी र चर्चाको राम्रो माध्यम बनेको छ । हाँस्य सिरियल ‘भद्रगोल’की कलाकार रक्षा श्रेष्ठ म्यूजिक भिडियोमा राम्रैसँग जमिरहेकी छिन् । उनले मोडल रञ्जन रिजालसँग मोडलिङ गरेको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘थाहा छ मेरो मुटुमा तिम्रो नाम छ’ बोलको गीतको भिडियोमा रक्षा र रञ्जनले मोडलिङ गरेका हुन् । नागेन्द्र श्रेष्ठको स्वर, दीपक शर्माको संगीत रहेको गीतमा अरुण ...
साम्राज्ञीपछि प्रेमगीत-२ की नायिका अश्लेषाको तिघ्राको ट्याटु चर्चामा (भिडियो रिर्पोट)
आजकल नेपाली नायिकाहरुमा पनि गज्जबको ट्याटुमोह छ। उनीहरुले आफ्ना शरीरका विभिन्न अङगहरुमा ट्याटु खोपाउदै आएका छन्। कही साता अघि मात्र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले स्तनमुनी ट्याटु खोपाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो भने उनको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो। साम्राज्ञी मात्र नभएर नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने अन्य नायिकाहरुले पनि आफ्ना विभिन्न भागहरुमा ट्याटु खोपाउँदै आएका छन्। यस्तैमध्येकी एक हुन् न...
६ बर्षे प्रेम असफल भएपछि तर्सेकी आशिष्माले अन्तत यसरी मागी बिहे गर्दै(भिडियो)
६ बर्षे प्रेम असफल भएपछि तर्सेकी आशिष्माले अन्तत यसरी मागी बिहे गर्दै(भिडियो) https://youtu.be/1q4c_0TxfFU
छवि ओझासँग मेरो बाल विवाह थियोः अभिनेत्री रेखा थापा
काठमाडौं/ चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले आफ्नो बाल विवाह भएको बताएकी छन् । १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंको लाजिम्पाटमा आयोजित “म बोल्छुु” कार्यक्रममा उनले आफू अहिले बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा रहेको बताएकी हुन् । ‘मेरो बाल विवाह थियो । जुन दिन मैले आफ्नो भूमिका थाहा पाएँ त्यसपछि विद्रोह गरें । घरबाट केही गर्छु भनेर निस्केकी थिएँ । त्यसैले म अहिले बाल विवाह विरुद्धको अ...
‘सिमसिमे पानीमा’ फेम गायिकाको २५ बर्षे गीति यात्रा
‘सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेइमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा….।’ एउटा जमाना थियो, सिमसिमे पानीमाको । बिहे, कार्जे, भोज–भतेर जहाँपनि, जहिले पनि घन्कन्थ्यो यो रोमान्टिक लोक धुन । सुन्दै नाँचौं, नाँचौं लाग्ने । गीतले २५ बर्ष तय गरेको छ । साथसाथै ‘सिमसिमे पानीमा’ फेम गायिका रेखा शाहको करियरले पनि । किनभने त्यही गीतबाट उनले आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । रेखाले रेडियो नेपालमा यो गीत रेकर्ड गराइन्, २०४९ ...